Shangri-La dia miraingiraingy azon'ny dimy slot lalao amin'ny dimy ambin'ny folo paylines raikitra mifototra amin'ny angano ny tantara fahiny Tibet. What makes this best slots jackpot game is mind blowing graphics along with an impressive jackpot reward. The lalao ho ambony ny resahana ny renirano sy ny ony amin'ny tempoly tendrombohitra hevitra hoe tena toa mahagaga. Ny mozika eo aoriana dia tena mampitony sy izay manampy anao hifantoka foana tony sy saina. Ny rivo-piainana ao amin'ny lalao mitondra anao any amin'ny tontolo hafa tanteraka ny saina manainga fanahy sary. Mba hametraka ny filokana, dia afaka misafidy avy ho ambany dia ambany toy ny 20p ka miakara any amin'ny lalao ny indrindra ny £ 90 isan-kofehy ireny.
Momba ny developer ny Shangri-La
Io herin'ny maizina slots tsara indrindra jackpot lalao dia novokarin'ny NextGen (NYX), malaza Casino marika amin'ny fampandrosoana ny roapolo taona ny traikefa. Efa namorona sokajy isan-karazany an-jatony ny Casino Lalao izay nanao azy iray amin'ireo folo-tampon'ny orinasa eto amin'izao tontolo izao.
Izany no iray amin'ireo tsara indrindra slots jackpot lalao rehefa avo-kalitao sary sy ny feo. Misy ny sasany mahafinaritra marika ny tigra fotsy, elefanta, tokantandroka, tempoly, antsy sy lota voninkazo. Ny fandoavana ny marika ambony tsy hafa noho ny tigra fotsy mahery izay dia mirohondrohona amin'ny mandresy isan'ny 500 fotoana ny tsato-kazo. Mba hahazoana fa mila manana dimy marika manerana ny matanjaka indrindra payline, dia ny foibe laharan-tseza eo amin'ny reels. Ny kely karama ny marika no nilalao karatra diamondra, spade, fo sy ny fikambanana izay mitovy vatosoa. Misy tombony fito mifanitsy amin'izy ity lalao ity, ary telo samy hafa izy ireo marika ny ankizivavy sy efatra miendrika boribory lavalava artefacts.
Wild Features: Ny sary ny tovovavy tsara tarehy tao amin'ny toetsika dia ny bibidia, ary mandrakotra marika rehetra tena ratsy fanehoana an'ohatra. Ankoatra, sary hafa amin'ny afo lit toetsika tsapaka toa tahaka ny fivoaky ny hanatitra mandresy bebe kokoa tsikombakomba. Misy ihany koa ny mety hisian'ny stacked bibidia izay olo-malaza iray manontolo ny ankizivavy toa mba hanolotra tsara kokoa Fandresena.
ampielezo Feature: Ny vavaka kodia dia ny aelezo endri-javatra io lalao jackpot slots tsara indrindra, ary ny telo na mihoatra izany endri-javatra mahatonga tombony. Dimy izany famantarana manerana ny payline ihany koa ny mahatonga ny jackpot mahazo tombony izay 3000 vola madinika nandresy. Izany dia afaka mahazo lehibe raha milalao avo-zava-dehibe filokana.
Miaraka amin'ny sary sy ny loko manintona marika, tsara indrindra izany slots jackpot lalao isan-karazany manome tombony endri-javatra dia afaka mandresy avy. Ity tokoa no Ilay tsara indrindra lalao hanandrana raha manao ny sasany ho amin'ny volantsika lehibe.